Eedeysanaha ugu dambeeyay ee xaday sawirada iCloud ilaa dad caan ah oo lagu xukumay 8 bilood oo xabsi ah | Wararka IPhone
Eedeysanaha ugu dambeeyay ee xaday sawirada iCloud ee dad caan ah oo lagu xukumay 8 bilood oo xabsi ah
George Garafano, oo ka mid ah afarta loo soo xaday tuugada sawirada iCloud laga soo qaaday dad caan ah sanadkii 2014 oo markii dambe lagu faafiyey internetka., waxaa lagu xukumay 8 bilood oo xarig ah. Garafano ayaa lagu eedeeyay inuu jabsaday akoonada iCloud ee in kabadan 200 oo qof mudo 18 bilood gudahood ah, oo ay kujiraan kuwa caan ah qaar ka mid ah, sidaa darteed muhiimadda iyo sumcadda kiiska.
Xaakimka Federalka ee Connecticut wuxuu amar ku bixiyay in la xidho Garafano muddo 8 bilood ah, marka lagu daro 3 sano oo kormeer ah oo ay masuuliyiintu sameeyeen ka dib markay dhammeeyeen xukunkiisii. Bishii Abriil ee la soo dhaafay, Garafano ayaa qirtay dambiga ah inuu soo diray emayllada been abuurka ah, iyagoo iska dhigaya inay yihiin xubno ka tirsan kooxda amniga ee Apple si ay u helaan magacyada iyo furaha sirta ah.
Intii kiisku socday, dacwad oogayaashu waxay ku andacoodeen in Garafano uu qaar ka mid ah sawiradii la xaday ku badashay hagardaamo kale iyo sidoo kale, waxaa laga yaabaa inay iibiyeen qaar iyaga ka mid ah si ay u kasbadaan dakhli dheeri ah, inkasta oo tan dambe aan la xaqiijin karin. Xeer ilaaliyeyaashu waxay codsadeen in lagu xukumo 10 ilaa 16 bilood oo xabsi ah, halka qareenka difaaca uu codsaday in la xukumo 5 bilood, kadibna XNUMX bilood oo xabsi guri ah.
Afar ayaa ahaa dadka la eedeeyay helitaanka akoonnada 'iCloud' iyadoo la adeegsanayo phishing iyada iyo qofkii ugu dambeeyay ee la xukumay: Ryan Collins, Edward Majerczyk iyo Emilio Herrera. Dhammaantood waxaa lagu xukumay xukunno u dhexeeya 9 illaa 18 bilood oo xabsi ah.
Hesho noocan ah waraaqaha, nasiib daro waa wax caadi ah, oo kaliya maahan inay Apple soo dirtay, laakiin sidoo kale bangiyada. Emailadan waxaa weheliya xiriiriye na siinaya muuqaal la mid ah kii ay soo bandhigtay shirkadda ee aragti ahaan dirtay. Haddii aan gujino oo aan galno xogteena marin u helka, waxaan siineynaa dhammaan macluumaadkayaga dadka aan la aqoon, dadka laga bilaabo xilligaas ka heli kara koontadayada dhammaan macluumaadka aan ku keydinay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Eedeysanaha ugu dambeeyay ee xaday sawirada iCloud ee dad caan ah oo lagu xukumay 8 bilood oo xabsi ah
Taxanaha Apple Watch 4 wuxuu yeelan doonaa qaraar dhan 384x 480p
Adeegga fiidiyowga ee Apple ayaa si dhakhso leh u kori kara